Tababare Diego Simeone oo ka dhawaajiyey inuu ka tagi karo Kooxda Atletico Madrid dhammaadka xilli ciyaareedkan – Gool FM
Tababare Diego Simeone oo ka dhawaajiyey inuu ka tagi karo Kooxda Atletico Madrid dhammaadka xilli ciyaareedkan
(Madrid) 07 Jan 2021. Kaddib markii laga reebtay tartanka Copa Del Rey Tababare Diego Simeone ayaa ka dhawaajiyey in uu ka tagi karo kooxda Atletico Madrid dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Simeone iyo Atletico waxaa shalay oo Arbaco ahayd tareenka tartanka Copa del Rey ka tuurtay kooxda heerka saddexaad ee Cornella, waxaana looga adkaaday 1-0 goolkaasoo uu dhaliyey daafacii hore ee Atletico B ee Adrian Jimenez.
Ricard Sanchez ayaa kaarka cas ka qaatay kulankan Atletico Madrid, saxaafadda Spain ayaana ku tilmaamay arrintan musiibo iyo inay tahay tii ugu xumeyd macallin Simeone kaasoo kooxda hoggaamiyey 502 kulan.
Macallin Simeone ayaana yiri: “Cornella si fiican ayay u ciyaareen, ciyaarta oo dhan waxa ay doonayeen wax ka wanaagsan wixii aan doonaynay.
“Waxay ka faa’iideysteen xaaladaha kubbadaka dadabyada laga soo karooso, isla markiiba waxay heleen goolka.
“Wiilashu waxay isku dayeen inay u tartamaan sida ugu fiican. Qeybtii hore, waxaan helnay fursado badan, kan labaadna wuxuu ahaa mid ka roon, waa ay adkayd xaaladdu kaddib kaarkii casaanka ahaa.
“Tartankaan nama siin annaga qanacsanaan sanadihii ugu dambeeyey, laakiin xalka waa in la helaa haddii aan halkaan joogno sanadka soo socda” hadalkaan dambe ayaana loo fasiray in macallin Simeone uu ka tagi doono kooxda dhammaadka xilli ciyaareedkan.